Miantso milina famaliana | Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao Suisse - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Suisse
Rehefa nanomboka nanasitrana aretina aretina hoditra malemilemy aho, dia nolazaina fa telo amin'ny folo ny marary no tsy nandray ny zava-mahadomelina. Tsy nieritreritra mihitsy aho fa azo alaina ho zava-poana ny fanafody ary manantena ny ho iray amin'ny fito tsara vintana. Tiako kokoa raha tsy hanazava izany amiko ny dokotera satria nanelingelina ahy izy fa afaka mandany ny fotoanako sy ny volako ary mety hampidi-doza ireo voka-dratsy tsy mahafinaritra. Tamin'ny faran'ny herin'ny volana faharoa nahitana fitsaboana dia hoy ilay dokotera tamim-pitsikiana: valiny ianao! Amin'ny fitsaboana, amin'ny famaliana (Respondent) manondro marary iray izay mamaly zava-mahadomelina toy ny andrasana. Niasa, nahazo aina aho ary faly momba izany.
Ny fitsipiky ny fifandraisan'ny zava-mahadomelina sy ny marary dia azo ampiharina amin'ny fifandraisantsika amin'ny mpiara-belona amintsika. Raha tsy mamaly ny fanontaniako ny vadiko ary manohy ny famakiana ao amin'ny gazety, dia toa ny zava-mahadomelina tsy miteraka fihetsika izany.
Ny fitsipiky ny antony sy ny fiantraikany koa dia hita miaraka amin'ilay Andriamanitra Mpamorona sy ny zavatra noforoniny. Ny fifaneraserana, fihetsika mamaly ny olombelona miaraka amin'ny olombelona dia naseho tamin'ny fomba samihafa tao amin'ny Testamenta Taloha. Matetika ny olona no mihetsika amin'ny tahotra, indraindray amin'ny fankatoavana ary amin'ny tsy fankatoavana. Naneho ny tenany tao amin'i Jesosy ao amin'ny Testamenta Vaovao Andriamanitra. Namaly tamim-pinoana ny mpitondra fivavahana ka naniry hovonoina izy satria nandrahona ny toetrany.
Ahoana no tokony handraisan'Andriamanitra an'io fihetsika io? Talohan'ny nananganana an'izao tontolo izao dia nanomana drafitry ny famonjena ho antsika olombelona Andriamanitra. Tiany isika rehefa mpanota sy fahavalo isika. Manantona antsika Izy na dia tsy te ho tratrarina aza isika. Tsy misy fepetra ny fitiavany ary tsy mitsahatra.
Ny apôstôly Paoly dia maneho fitiavana an'Andriamanitra, izay mifandraika amintsika. Hoy i Jesosy: "Izao no didiko dia mifankatia tahaka ny nitiavako anareo" (Jaona 15,12). Ahoana no tokony handraisantsika ny fitiavana tonga lafatra?
Manana safidy ny te-hihetsika ny Fanahy Masina isan'andro isika na tsia. Ny olana dia, mamaly tsara isika indraindray ary indraindray tsy tsia. Nefa rehefa miresaka ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra isika dia tsy tokony hanadino na inona na inona - Jesosy no valiny tonga lafatra. Mamaly izy na dia malemy aza ny valin-tenintsika. Ka nanoratra i Paoly hoe: «Fa aseho eo anatrehan'Andriamanitra ny fahamarinana, izay avy amin'ny finoana amin'ny finoana; araka ny voasoratra hoe: Ny marina ho velona amin'ny finoana » (Romana 1,17).
Ny finoana no fanehoana fitiavana an'Andriamanitra, izay olona Jesosy Kristy. «Koa nanahaka azy toy ny zanaka malala Andriamanitra ary mandeha amin'ny fitiavana tahaka ny nitiavan'i Kristy antsika ary nanolotra ny tenany ho antsika ho fanomezana sy sorona, Andriamanitra ho fofona manitra» (Efesiana 5,1: 2).
Jesosy no "fanafody" raisintsika mba hiatrehana ny olan'ny ota. Nampihavanin’Andriamanitra tamin’ny olona rehetra izy noho ny fandatsahan-dra sy ny fahafatesany. Noho izany, tsy mila manontany tena amin'ny tenanao na iray na telo na fito izay tsy mamaly fa azonao antoka fa ao amin'i Jesosy no mamaly ny olona rehetra.